Ra’iisul Wasaare Khayre oo magacaabay guddi gurmad Qaran – Hornafrik Media Network
Amaanka xarunta BF ee Villa Hargeysa oo lala wareegey iyo xayiraad lagu soo rogay…
Ciidamo gadoodsan oo xirtay waddooyinka magaalada Gaalkacyo
Waan-waan laga dhex-bilaabay madaxda Soomaalida iyo wararkii ugu dambeeyey
Xog: Maxaad kala socotaa khilaafka sababay in baasaboorka laga xanibo Kulane Jiis?
Duqeyn lagu dilay dad badan oo shacab ah oo xalay ka dhacday Saakow
Dagaal culus oo ka dhex qarxay Al-Shabaab iyo khasaare ka dhashay
Ra’iisul Wasaare Khayre oo magacaabay guddi gurmad Qaran
By Liibaan Nuur	 On Dec 28, 2019
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa magacaabay guddi Qaran oo ka shaqeeya isku dubbaridka gurmadka loo sameynayo dadka ay waxyeelladu ka soo gaartay qaraxii is-miidaaminta ahaa ee saakay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraha oo ugu horreyn u tacsiyadeeday ehelada dadkii waxyeelladu ka soo gaartay weerarkaas ayaa sheegay inuu magacaabay guddiga ka shaqeyn doona isku dubbaridka gurmadka loo fidinayo dhaawacyada iyo gargaaridda eheladii ay ka bexeen dadkii ku dhintay qaraxaas.
Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in dhaawacyada aan gudaha wax looga qaban karin loo raadinayo caawimaad iyo daryeel dalka dibaddiisa ah, waxuuna ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta oo ay joogaan inay qayb ka qaataan gurmadka dadkii ku waxyeeloobay musiibadaas.
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo meel mariyay sharciga doorashooyinka Qaranka, Sawirro
FIQI: “Shacabka Muqdisho waxaa haysta Shabaab ku qarxi oo boolis ku qari”
Liibaan Nuur	 Feb 11, 2021 0
International conference to evaluate elections, security opens in Mogadishu
Liibaan Nuur	 Dec 7, 2020 0
International conference to evaluate elections, security…
© 2021 - Hornafrik Media Network. All Rights Reserved.